Hanti Dhowraha Guud ee Qaranka: Halis ayaan ku jirnaa, isla xisaabtana waa la diiday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Hanti Dhowraha Guud ee Qaranka: Halis ayaan ku jirnaa, isla xisaabtana waa la diiday
Mareeg.com: Hanti Dhowraha Guud, Dr. Nuur Faarax ee Qaranka ayaa sheegay in shaqadiisa lag horjiigsaday, islamarkaana la isku dayey in isaga dhibaato loo geysto xalay.
Dr. Nuur Faarax oo maanta shir jaraa’id ku qabta magaalada Muqdisho ayaa sheegay in maamulka madaxtooyada Soomaaliya uu shaqada xafiiskiisa horjoogsaday.
Waxa uu sheegay in xalay isaga la horjoogsaday madaxtooyada, sidoo kalana loo hanjabaya shaqaalaha xafiiska Hanti Dhowraha Guud ee Qaranka.
Dr. Nuur Faarax Jimcaale Hanti Dhowraha Guud ee Dowladda Soomaaliya ayaa tilmaamay in naftiisa ay halis ku jirto waxa uuna xusay in mudo dheer Xafiiska Hanti dhowrka Qaranka uu ku yaallay gudaha Madaxtooyada Soomaaliya isla markaan uusan ogeyn sababta loogu diiday in Xafiiskisa uu ku shaqeeyo Gudaha Xarunta Madaxtooyada Soomaaliya.
“Waxaa naloo diiday inaan ku shaqeyno xafiiska Hanti Dhowrku ku lahaa madaxtooyda ilaa 1975-tii, xalayna gaarigeyga waxaa loo diiday madaxtooyada, waxaana la isku dayey in dhibaato la ii geysto, waxaana arrintaas sabab u ah askarta ilaalisa madaxtooyada iyo maamulkooda” ayuu yiri Dr Nuur Faarax.
“Maamulka ayaan weydiinay Arrinta Xanibaada waxaa noogula Jawaabay waa Xanibaad marka waxaan Cadeeyneynaa in Shaqadii aan Shacabka u haynay Madaxtooyada Soomaaliya laga Joojiyay” ayuu raacsaday hadalkiisa Dr Nuur Jimcaale.
“Shaqadii Qaranka aan u heynay iyo baaristii aan u heynay waxaa galay hakad, waxaana sabab u ah madaxtooyada iyo askarta maamusha meesha laga soo gala Villa Somalia” ayuu sidoo kale yiri Dr. Nuur Faarax.
“Shaqo nadiif ah waddanka u qabta ayaan is laheyn, laakin hadda nolosheena ayaa halis ku jirta, aniga si xun ayaa la iila hadlay, shaqaalahayagiina waa la argagax geliyey, mana la ogola isla xisaabtan” ayuu sidoo kale Hnati Dhowraha Guud ee Qaranka.
Hanti Dhowraha Guud ee Qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale ayaa Madaxweynaha Soomaaliya, Raysal Wasaaraha iyo Baarlamaanka Soomaaliya ugu baaqay in arrintaani ay wax ka qabtaan oo ay soo fara geliyaan maadaama sida uu tilmamay uu diyaar u yahay in uu ka hortago masu masuqa iyo ku tagri falida Hantida Qaranka.
Xafiisyada Hanti dhowraha Qaranka iyo Xeer ilaalinta ayaa Mudooyinkii dambe waxay wadeen baaritaano iyo dabagal ay ku sameynayeen Masuuliyiin ka tirsan Dowlada Soomaaliya waxayna horay u soo bandhigeen in 19 Wasaaradood oo ka mid ahaa 25-kii Wasaaradood ee Xukuumadii C/weli Sheekh Axmed Maxamed lagu helay masu maasuq iyo iney si gaar ah u isticmaalaan Hantida Qaranka.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha uu ka jiro Masuqmaasuqa baahay, iyadoo la ogyahay in mark kasta oo khilaaf yimaado ay hanitada qaranka ku iibsato codadka xildhibaanada.
Dowladda Soomaaliya oo guddi u saartay xuska maalinta Af-soomaaliga
Madaxweyne Xasan oo saxiixay heshiiska dhowrista Xuquuqda Caruurta